Sintomy ny Android M Developer Preview 3 ho an'ny Nexus | Androidsis
Android M Developer Preview 3 azo alaina amin'ny fitaovana Nexus
Manuel Ramirez | | About us, hevitra, Tutorials
Omaly Ny tolak'andro dia namoaka ny topi-maso fahatelo amin'ny Android 6.0 Marshmallow i Google ho an'ny fitaovana Nexus izay hanana ny kinova vaovao rehefa mivoaka amin'ny fararano. Telo teo aloha izay ny anteroom ho an'ny fandefasana farany Android Android vaovao izay hiaraka amin'ireo fitaovana Nexus hananantsika amin'ity taona ity, fa raha mandeha araka ny voalaza ny zava-drehetra dia izy ireo no Nexus 5 vaovao avy amin'ny LG ary iray hafa noforonina tamin'ity indray mitoraka ity ny orinasa sinoa Huawei.
Satria efa fantatsika ny anaran'ny kinova Android 6.0 vaovao miaraka amin'ilay Marshmallow izay manaraka ny teny nalaina teo aloha, ny Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ary Nexus Player dia afaka manokatra manaikitra hametrahana ny topi-maso fahatelo, izay ny tena izy dia tsy mitondra fiasa vaovao marobe, fa kosa feno amin'ny fanitsiana sy fanatsarana ny fahombiazana izay hita tamin'ireo roa teo aloha. Etsy ambany no hahitanao ny rohy mankany amin'ny fampidinana an'ity topi-maso ity ho an'ny fitaovana Nexus sy ny mety ho fidirana amin'ny antsipirian'ny sasany amin'ny vaovao.
1 Fiovana kely indrindra ho an'ny fahatelo teo aloha
2 UI Tuner amin'ny Android 6.0
Fiovana kely indrindra ho an'ny fahatelo teo aloha
Izahay dia efa namoaka ny wallpaper ofisialy folo ary inona ny sary mihetsika Android Marshmallow vaovao azonao atao misintona ary apetraho amin'ity fidirana ity. Ankoatra ireo vaovao mahafinaritra ireo, manana fanovana vitsivitsy isika fa tsy dia misy dikany izany voafetra amin'ny sehatra tsotra vitsivitsy amin'ny alàlan'ny interface na UI ary inona no API ho an'ny dian-tànana.
Ianao dia afaka misintona ny fananganana ho an'ny Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ary ny Nexus Player fitaovana. Izy ireo dia ao anaty endrika TGZ raha hisintona an-tanana ny tranokala mankany Google Android developer.
Satria ny fanavaozana dia ho tonga amin'ny endrika OTA ihany koa, azonao atao ny mamaky azy ka tsy mila miditra ianao raha tsy maintsy mametraka azy io amin'ny tanana, izay mety manana olana sasany noho ny hafa. Tadidio fa raha te hametraka an'ity kinova ity dia tokony hadio ny bootloader.
Raha hametraka azy dia afaka mandeha ny ity mpitari-dalana ity.
UI Tuner amin'ny Android 6.0
Ankoatry ny inona ny sary an-tsary, ny sary mihetsika boot ary ny fanovana sasany amin'ny interface, dia mbola misy ny System UI Tuner, izay ankoatry ny zavatra hafa dia mamela antsika hanisy ny isan-jaton'ny bateria amin'ny bara bateria esory ny sary masina avy eo amin'ny bara fametahana ary ampidiro ao anaty hitsin-dàlana aza. Raha fintinina, io System UI Tuner io dia iray amin'ireo endri-javatra kely ireo, fa raha hainao ny mampiasa azy dia afaka manome antsika fahombiazana lehibe hamaritana tsara kokoa ny fanaingoana ny telefaonintsika.
Mbola misy ao amin'ity topi-maso fahatelo ity raha toa ka tsy namafa ny angon-drakitra mpampiasa anao ianao na inona na inona antony. Ao amin'ny faritra misy ny boaty raha mihitatra ny fampandrenesana, raha manao press lava eo amin'ilay kisary kely misy kodiarana isika hampiato ny System UI Tuner izahay. Ao amin'ny horonantsary etsy ambany no ahitanao azy mora foana.
Efa eo am-pelatanantsika ilay fahatelo teo aloha, Ankehitriny ny zavatra manaraka dia ny fandraisana ny Android 6.0 Marshmallow amin'ny tànana malalaka izay indrindra no nalahatr'i Google amin'ity fararano ity, izay ho avy tsy ho ela. Tsy fantatsika ny daty nanombohana ka ny zava-drehetra dia mijanona eny amin'ny habakabaka alohan'ny zava-tsy ampoizina izay hanomboka ny Android 6.0 Marshmallow. Eny, hitandrina isika handefa ireo vaovao haingana araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Android M Developer Preview 3 azo alaina amin'ny fitaovana Nexus
Nihemotra tamin'ny fomba ofisialy ny taona 2016 ny Project Ara
Sintomy ny rindrambaiko Android Marshmallow ary apetraho amin'ny tranonao Android ny sary mihetsika boot